Ubanjwe enyangeni 'obulale abomndeni' - Ilanga News
Home Izindaba Ubanjwe enyangeni ‘obulale abomndeni’
Ubanjwe enyangeni ‘obulale abomndeni’
Kuthiwa ungqokloze amalungu awu-6 ewasola ngokuthakatha
UBANJWE ngoMsombuluko esebhace enyangeni owesilisa waseNkanini, eShowe, osolwa ngokubulala amalungu awu-6 omndeni kaninalume ngoMgqibelo ebusuku ngoba ewasola ngokukhunkula.
UMnu Sthembiso Mthimkhulu (36), ongusonhlalakahle eSikhaleni (eSikhawini), uvele eNkantolo yeMantshi yaseShowe izolo ngo-Lwesithathu ngezinsolo zokudubula abulale uninalume uMnu Christopher Khumalo (75), yinkosikazi yakhe uNkk Mazibani Khumalo uMaSigampu (62), uNkz Sinothile Khumalo (18), uNkz Mbali Khumalo (29), uThabo Khumalo (10) no-Elihle Sigampu.
Kulesi sigameko kusinde ingane eneminyaka ewu-9 ubudala, ecashe ngekhethini ngesikhathi kudutshulwa.
Kuthiwa umkhosi ngokubulawa kwabo uhlatshwe yindodakazi yakhona ebisesibhedlela iyoteta.
Ngesikhathi ILANGA lihambele emndenini wakwaKhumalo izolo, lixoxe noMnu Nhlanhla Sigampu ongumfowabo kaMaSigampu, yena nomndeni wakhe abebevutha bengabaselwe ngalesi senzo.
“Udadewethu ubulawa nje, ubeseke wasibikela ukuthi akahleli kahle emzini, bamnuka ngokuthi uyathakatha yena nomyeni wakhe. Usitshele ukuthi usolwa ngokuba nesandla ngokushona kwendodana yomyeni wakhe, eyashona ngo-2018.
“Yize esixoxele le ndaba, besingazitsheli ukuthi isimo sesisibi ngale ndlela. Uze wasitshela ukuthi umsolwa ubehlale ebasongela ngokuthi uzoziphindiselela kubantu ababulala umzala wakhe,” kusho uMnu Sigampu.
Uthi bewumndeni wakwaSigampu bahlukumezekile ngendlela udadewabo abulawe ngayo nomndeni wakhe, kanti okubaphathe kabi kakhulu wukuthi umndeni wakwaKhumalo kawuzange uzihluphe ngokubazisa ngento esiyenzekile, baze bezwa sebefonelwa yindodakazi kadadewabo.
ILANGA lithole ukuthi umsolwa ubeyisethenjwa emndenini, ethathwa njengengane elungile. Kuthiwa ubengumuntu othulayo, ekhuluma uma esephuzile, okuyilapho nezinsongo zokubulala uninalume nomndeni wakhe ebeziye ziqhamuke khona.
Omunye woninalume bakamsolwa, uMnu Bhekithemba Khumalo, uthi bewumndeni basathukile ngento eyenziwe ngumshana wabo.
“Sithole ukuthi umfowethu nomndeni wakhe bahlaselwe ngo-Mgqibelo ngabo-11 ebusuku. Kuthiwa kufike umshana ozalwa ngudadewethu omncane, wabaqoqela endlini eyodwa bonke, wabadubula.
“NgeSonto emini, ngithole ucingo luvela kuyena umsolwa engitshela ukuthi useThekwini, ucela ngiphuthume emzini kamfowethu ngoba uthole umbiko wokuthi kunabantu abangaziwa abagqekezile bathatha yonke impahla.
Kube yisikhathi esincane ngiqede ukukhuluma naye, ngisamangazwe yindaba abengitshela yona, kwangena ucingo lungibikela ukuthi umfowethu nomndeni wakhe sebebulewe.
“Ngimane ngafikelwa wukusola ukuthi umshana unesandla kule nto,” kusho uMnu Khumalo.
ILANGA liphinde lakhuluma nomunye umfowabo kamufi, uMnu Bhekinkosi Khumalo okunguyena okhulumela umndeni oveze ukuthi bebengenalo ulwazi ngengxabano emndenini wakubo.
Uxolisile emndenini wakwaSigampu ngokuthi bangawazisi ngomonakalo owenzekile. Uthi lokho kudalwe wukuthi bebengenayo inombolo yomuntu abebengaxhumana naye emndenini.
Le mindeni bekubonakala ukuthi isimo kasisihle phakathi kwayo ngenxa yalesi sigameko, njengoba ize yavumelana ngokuthi abakwaSigampu bazosithatha isidumbu sikaNkk Khumalo, izingane zakhe nabazukulu bayozingcwabela bona kwaSigampu, eNanda.
UMnu Khumalo uzongcwatshwa wumndeni wakhe.
UNgqongqoshe wamaPhoyisa, uMnu Bheki Cele, uhambele lo mndeni izolo ngoLwesithathu emuva kokuzwa lolu daba eyobhonga emswanini.
Uzwakalise ukujabula okukhulu ngophenyo lwamaphoyisa oluholele ekuboshweni komsolwa.
“Ngiyazi ukuthi indawo yaseShowe ingenye yezindawo ezaziwa ngokungabi negama elihle uma kukhulunywa ngokubopha abantu abenze amacala okubulala asuke evuliwe. Ngiyajabula ukuzwa ukuthi kuleli kukhona oseboshiwe.
“Ngiyacela ukuthi nakulawa angakabophi niphinde nisebenzise le migudu eniyilandelile kuleli cala,” kusho uMnu Cele.
Ukushilo ukuthi umsolwa uvelile enkantolo izolo ngoLwesithathu ngamacala awu-6 okubulala, kulindeleke ukuba aphinde avele mhla ka-5 kuNdasa (March).
Previous articleInjabulo ngakhushulwa intela
Next articleBenze ezibukwayo kwiMaths neScience